चौतारा टुडिखेलमा आपतकालीन उद्धार! – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ चौतारा टुडिखेलमा आपतकालीन उद्धार!
चौतारा टुडिखेलमा आपतकालीन उद्धार!
सिन्धु खबर जेठ १, २०७७ गते १८:३३ मा प्रकाशित
चौतारा । टुडिखेलमा आज फरक दृश्य देखियो । टेण्टहरु राखिएका थिए । टेण्टमा हस्पिटलमा चाहिने जस्ता अत्यावश्यक सामाग्री थिए । औषधि पनि थिए । पीपीई लगाएर बसेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी थिए । त्यतिकैमा कोही बिमारी भएको फोन आयो । साइरन बजाउँदैं एम्बुलेन्स कुदे ।
एकैछिनमा एम्बुलेन्सले बिरामी लिएर आयो । केही बिरामीलाई उद्धार गर्दै गरेका जस्ता देखिन्थे । अरु एम्बुलेन्स पनि लस्करै राखिएको थियो । मानिसहरु वरिपरीबाट हेरिरहेका थिए । के भयो यहाँ भन्दै थिए । ठूलै घटना भएजस्तो लाग्थ्यो । तर यहाँ महामारी वा घटना भएको हैन् । महामारी होला कि भनेर त्यसको तयारी स्वरुप गरेको पूर्वअभ्यास (डेमो) हो ।
आज चौतारामा विपद व्यस्थापन समितिको आयोजनामा टुडिखेलमा कोरोना महामारी आउँदा के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले देखाएको जनचेतनामूलक अभ्यासका दृश्य हुन् यी । अभ्यासमा कोरोना संक्रमण भइहाले बिरामीको उद्धार, उपचार र बिरामीको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चेतनामुलक प्रस्तुति देखाइएको हो ।
उद्धार र बिरामीको उपचारपछि गाडीको निर्मलीकरण कसरी गर्ने, बिरामी बसेको ठाउँको निर्मलीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि डेमो देखाइएको थियो । सेनाको समन्वयमा प्रहरी र रेडक्रसलगायत पूर्वाभ्यासमा सहभागी भएका थिए । अभ्यासमा पीपीईलगायत आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग, बिरामीको उद्धार, हस्पिटलमा ल्याएर उपचार गर्ने कार्यविधि र यदि बिरामीको मृत्यु भइहालेमा शव व्यवस्थापन गर्ने बारे देखाइएको थियो ।